» खतरामा सज्जा र केभिन, फाईनलमा पुग्लान् ?
खतरामा सज्जा र केभिन, फाईनलमा पुग्लान् ?
३ भाद्र २०७७, बुधबार २०:३५
चन्द्र घलान,मकवानपुर, ३ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ फाईनलको नजिक छ । अहिले आईडलमा उत्कृष्ट ४ मा परेका सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, केभिन ग्लान तामाङ र किरण कुमार भुजेल भिडिरहेका छन् । यी मध्ये गत हप्ता किरण कुमार भुजेलले सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । प्रतियोगितामा गत हप्ता नेशन पुन मगर, सज्जा चौलागाईँ र केभिन ग्लान तामाङ बटम थ्रीमा परेका थिए । जसमध्ये नेशनको नेपाल आईडल यात्रा टुङ्गिएको थियो । यस हप्ता कसको यात्रा टुंगिनसक्छ भन्ने विषयमा दर्शकहरुको आ–आफ्नै मत छन् । बटम थ्रीमा परेका हिसाबले सज्जा चौलागाई र केभिन ग्लान तामाङ सर्वाधिक खतरामा छन् ।
गत हप्ता किरण कुमार भुजेलले सर्वाधिक भोट ल्याएको र प्रविण बेड्वाल सेफ भएका कारण उनीहरु यो हप्ता पनि सुरक्षित छन् भन्ने त होईन तर बटम थ्रीमा परेका आधारमा भने सज्जा र केभिन खतराको घेराभित्र छन् । यी दुईमध्ये सज्जालाई पहिलो महिला नेपाल आईडल हुनसक्ने दाबेदारका रुपमा दर्शकहरुले हेरेका छन् भने केभिनलाई प्रस्तुति र गायनका आधारमा दर्शकहरुले सर्वाधिक रुचाएका छन् । यी दुबै प्रतियोगीहरु ब्याण्डमा आवद्ध छन् भने औपचारिक रुपमा संगीत सिकेका छैनन् । अफिसियल गीतका हिसाबले सज्जाको केही साता अघि मात्रै केही अफिसियल गीतहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् भने केभिनले धेरै अघि केही गीतहरु सार्वजनिक गरेका थिए । यी दुबैको गायनमा संघर्षको कथा पनि निकै रोचक छ । यी दुईमध्ये सज्जाले आजसम्म सर्वाधिक भोट पाएकी छैनन् तर केभिनले २ पटक सर्वाधिक भोट पाइसकेका छन् । केभिन उत्कृष्ट ४ मा आईपुग्दा शोमा नै पहिलो पटक बटम थ्रीमा परेका हुन् । सज्जाले भने यो सहित ३ पटक बटम थ्रीको सामना गरेकी छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–
नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जितेकी सज्जाले यो सामग्री तयार पार्दाको समयसम्म १४ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । सज्जाले ४ वटा रेक्सपेक्ट पर्फोमेन्स अवार्ड, ३ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड र ७ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । सज्जा साँगितिक दुनियाँमा बिगत ६ वर्षदेखि सक्रिय छिन् । सानै छँदा गीत गुनगुनाउने सज्जाले विद्यालयमा विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदै गायन कला तिखारेकी हुन् । संगीतमा कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएकी सज्जाले प्लस टु अध्ययनका क्रममा विभिन्न स्थानमा स्टेज सिंगरको रुपमा पनि काम गरेकी थिईन् । सज्जा एसएलसी पश्चात नै ब्याण्डमा जोडिएकी थिईन् । उनी ‘द लोडिङ ब्याण्ड’ मा आवद्ध छिन् । उनका हालसालै केह अफिसियल गीतहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
त्यस्तै केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ मा अहिलेसम्म ९ वटा अवार्ड जितेका छन् । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिनले ४ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे, ४ वटा ग्लामर मोमेन्ट अवार्ड र एउटा रेक्सपेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । नेपाल आईडल सिजन ३ मा दमदार प्रस्तुकितका कारण चर्चामा रहेका केविन चितवनको पर्सा निवासी हुन् । उनी २१ वर्षका छन् । सानैमा आफ्ना दाजुहरुले गीतार बजाएको देखेर केविन संगीतमा आकर्षित भएका हुन् । पढाई र सँगीतलाई सँगै अगाडि बढाएका केबिनलाई १४ वर्षको उमेरमा बुवाले उपहार दिनुभएको गीतारले संगीत क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न हौस्यायो । गायक स्वप्निल शर्मालाई आईडल मान्ने केबिन स्याडोज ब्याण्डको ठूलो फ्यान हुन् । सुरुमा गीत गाउन लजाउने केविन गितार भने निकै राम्रो बजाउने गर्थे । उनले सँगीतको यात्राकै क्रममा ‘शास्त्र’ नामक ब्याण्ड जोईन गरे ।
त्यस ब्याण्डमा केही वर्ष बिताएका केबिन र उनको टिमले पछि अक्टेब ब्याण्ड स्थापना गर्यो । उनी गत ५ वर्षदेखि सोही ब्याण्डमा आवद्ध छन् । एक महिना मात्र औपचारिक संगीत सिकेका केविन संगीतलाई मानिसको मनसम्म जोडिएको भावना व्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा परिभाषित गर्छन् । उनले सन् २०१७ तिर एउटा गीत समेत सार्वजनिक गरेका थिए । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईको विचारमा यी दुई प्रतियोगीहरु दुबै जना फाईनलमा पुग्लान् वा कुनै एक जना बाहिरिएलान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।